Saturday December 14, 2019 - 12:37:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno iyo degmooyin katirsan gobolka Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya degmada Baraawe ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay goob isku imaatin ah oo uu ku sugnaa guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo weerarka ka dhashay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in guddoomiyihii Baraawe uu si dirqi ah isku day dil uga badbaaday balse waxaa dhintay askari kamid ahaa ciidamadii ilaalada u ahaa halka mid kale uu dhaawacmay.
Qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada degmada Baraawe, jugta qaraxa ayaa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada, Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan sida ay baahisay Idaacadda Andalus.
Dhinaca kale gaari ay la socdeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Bangaraafta loo yaqaan ayaa shalay gelinkii dambe ku gubtay deegaanka Warmaxan kadib markii qarax lala helay.
Sidoo kale hal askari katirsan ciidamada Canshuuraha maamulka degmada Afgooye ayaa lagu dilay isla gudaha degmadaasi, dadka deegaanka waxay sheegeen in rag hubeysan oo Al Shabaab katirsan ay askariga dileen xilli uu handadaad ku hayay qaar kamid ah ganacsatada Afgooye.